Mgbe ụfọdụ junk faịlụ nwere ike na-gị iPhone si arụ nakwa dị ka o kwesịrị. Ọ bụkwa eziokwu na junk faịlụ nwere ike na-n'ụdị ọ bụla n'ime gị iPhone na ọ dị mkpa na ị na-ekwentị gị free nke ndị a junk faịlụ. Ihe bụ nsogbu bụ na e nwere ọtụtụ ụdị nke junk faịlụ ka kpochara elu na ọtụtụ n'ime oge ị na-amaghị ebe na-amalite site. Luckily gị, ị na-nri ebe. Nke a bụ n'ihi na anyị na-aga na-enye gị a zuru ndu ka nhicha gị iPhone kpamkpam. Anyị na-aga-egosi gị otú ọcha gị iPhone nke ọ bụla junk faịlụ a pụrụ ichetụ n'echiche na na usoro melite ọrụ na arụmọrụ nke ekwentị gị. Ka na-amalite na kasị nkịtị nsogbu n'ihi na iPhone ọrụ.
Part 1. Olee ọcha "ndị ọzọ" na ekwentị gị
Part 2. Olee ọcha akwụkwọ ahụaja na gị iPhone
Part 3. Olee ọcha enweghị isi ngwa data na ekwentị gị
Part 4. Olee ọcha ratụ ratụ faịlụ gị iPhone
Part 5. Olee na-ehichapụ gị iPhone na-adịgide adịgide
Nsogbu na "ndị ọzọ" bụ na ọ na enyene a otutu ohere na gị iPhone na ike ya mere na-ị si akpakọba ihe ọ bụla ọzọ na ekwentị gị. Nke a nwere ike n'ikpeazụ ọgbaghara na gị ịrụ ọrụ ekwentị dị ka mma. Ọ bụrụ na ị na-eche ebe a "ndị ọzọ" data na-abịa site, ọ bụ Nchikota cache, kuki na album nkà ndị ọzọ data na-echekwara mgbe ọ bụla ị ibudata ma wụnye a faịlụ. A bụ otú ọcha "ndị ọzọ."
Nzọụkwụ 1: mee nkwado ndabere nke niile data na ekwentị gị. I nwere ike ime nke a na iCloud.
Nzọụkwụ 2: Ugboro abụọ ego na i ziri ezi kụziri elu gị niile data tupu ị na-akpali on kwụpụ atọ.
Nzọụkwụ 3: Tọgharia gị iPhone. Enweta na Ntọala mgbe ahụ General, Tọgharia na mgbe ahụ ihichapu niile ọdịnaya na Ntọala.
Nzọụkwụ 4: Nzọụkwụ atọ ga-akwụsị gị niile data ma hichapụ apụ niile nwa oge data na-eme ka elu "ndị ọzọ". Ị kwesịrị ị na mgbe ahụ weghachi gị azụ si iCloud na gị iPhone ga-adị ọcha nke "ndị ọzọ" data.
Ọ bụrụ na ị na-eji iOS 7 ị ga-chọpụtara na gị akwụkwọ ahụaja na-mgbe nọchiri gị ngwa ọdịnala na ị nwere ike ọ gaghị enwe ike ịhụ ya n'ụzọ zuru ezu. The iOS 8/9 edozi nsogbu a n'ihi anyị site ekwe ka ị na-akpali gị niile ngwa site na isi na peeji na-a ide ihuenyo na akwụkwọ ahụaja na na-agaghịkwa obscured. A bụ otú ime ya.
Nzọụkwụ 1: Gaa n'ụlọ gị gị na ihuenyo na enweta na ọ bụla ngwa ma jide gị mkpịsị aka ruo mgbe akara ngosi amalite n'ikwe.
Nzọụkwụ 2: Ka ịmepụta a ọhụrụ na peeji mbu, dọrọ niile ngwa anya na ugbu a ikpeazụ na peeji na gị iPhone n'ụlọ ihuenyo. Ka ngwa ọdịnala na-aga n'ebe ahụ ma na wee pịa na Home button ịzọpụta ọhụrụ page. Ọ bụrụ na ị na-eji iOS 8/9 ị ga-enwe a ọhụrụ na peeji na ọ bụ nanị na-egosi gị akwụkwọ ahụaja.
Enweghị isi data na gị iPhone nwere ike kpọrọ degrade ekwentị gị arụmọrụ na-eme ọbụna ka ọ nnọọ ike maka iOS mmelite ike ibudata na arụnyere. Nke a data nwere ike ịbụ na ụdị nwa oge faịlụ na mgbe ụfọdụ nchọgharị gị cache na ike ga-echekwara oge ọ bụla ị na-eji ihe nchọgharị gị ma ọ bụ download ihe ngwa si internet. Mkpa ka ị mgbe nile ikpochapụ ndị a na-achọghị data site na ekwentị gị na a bụ otú i nwere ike ime na-adị mfe.
Iji Doro Anya Cache na nchọgharị akụkọ ihe mere na gị iPhone-aga "Mwube" na pịgharịa gaa na ala ịchọta "Doro Anya History" na Doro Anya Kuki na Data ". Enweta na ha abụọ na akwado edinam.
I nwekwara ike iji ihe iOS ngwa ikpochapụ nwa oge faịlụ na kuki site na gị iPhone. Ndị a ngwa ọdịnala jupụta dịnụ ohere na gị iPhone N'ihi ya ese iOS na-akpaghị aka ọcha enweghị isi faịlụ. Ọ ga-ele anya ihe dị ka nke a.
Ratụ ratụ faịlụ gị iPhone pụkwara imetụta arụmọrụ nke ngwaọrụ gị na gbochie ihe iOS update si na-ekwesị arụnyere. E nwere ọtụtụ ụzọ ọcha junk faịlụ site na ekwentị gị ma onye anyị ga-akọwa n'okpuru nwere ike mere na iPhone onwe ya iji iCleaner Pro. A bụ otú.
Nzọụkwụ 1: Wụnye iCleaner Pro si cydia
Nzọụkwụ 2: Open iCleaner Pro wee pịa on Tụlee ịhụ size nke ratụ ratụ faịlụ na ahụ n'ezie faịlụ ga-ehichapụ. Ozugbo ị bụ afọ ojuju, pịa Hichaa junk faịlụ na ha niile ga--ehichapụ.
Nwere ike ị chọrọ ihichapu niile data ad ọdịnaya na gị iPhone na-adịgide adịgide mgbe ị chọrọ na-ere ekwentị ma ọ bụ nye ya onye na. Mgbe ahụ ihe mbụ na-abịa gị n'uche ga-abụ nrụpụta ọrụ na gị iPhone. Ị nwere ike iji ya ihichapu niile ọdịnaya na ntọala ndabere gị iPhone na mbụ. Otú ọ dị, ọ bụ eziokwu? Ọ bụchaghị. Ọ dị ya nnọọ anya dị ka dị nnọọ nke igbe, ma ehichapu data ike ka a natara na a data mgbake ngwá ọrụ. Nke ahụ bụ ikwu, sị, nzuzo gị dị ize ndụ.
Iji na-adịgide adịgide ehichapụkwa gị iPhone mere na ọ dịghị onye nwere ike na-ezu ohi nzuzo gị si gị ochie iPhone, ụzọ kasị mma bụ iji a ọkachamara data wiper ịrụ ya. Ebe i nwere ike iji Wondershare SafeEraser. Ọ na-ahapụ gị ehichapụkwa gị iPhone enweghị ihe ọ bụla onye data ekpe na otu Pịa. Ị adịghị mkpa ka nchegbu banyere ihe ọ bụla mgbe otu Pịa. Dị nnọọ download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị mbụ, ma ọ bụ i nwere ike ịga na-agụ ndu banyere na-adịgide adịgide erasing ihe iPhone ebe a.
Olee otú Chọọ Text Ozi na iPhone
> Resource> iPhone> Full Guide to Nhicha gị iPhone